Mashaariicda Horumarineed ee ka fulay gobalka Gedo sanadka 2017
By ibrahim Aden shire December 22, 2017
Waxaa si joogta ah u helnaa wararka iyo dhacdooyinka ka dhaco gobalka Gedo. Inta badan wararka aan helno waa kuwa xambaarsan sawir madow iyo mustaqbal murugo leh. Sababaha keenay in aan helno wararka xun kaliya waxaa ka mid ah dadka warka soo gudbiyo ujeeddooyinka ay ka leeyihiin.
Wararka ugu badan ee ku saabsan nolosha dadka Gedo iyo xaaladda uu marayo gobalku waxaan ka helnaa ama soo diyaariyo hayadaha samafalka. Ujeedka hayadaha waa in lagu baraarugaa dhibka ka jiro gobalka iyo baahida uu qabo sidaa awgeed waxay xoogga saaraan kaliya dhinaca qarracanka si loogu beer jileeco.
khadka kale ee aan akhbaaraha ku helno waa baraha bulshada iyo shabagadaha warbaahinta. Dadka gudaha joogo ayaa sawiro ama war kooban kasoo gudbiyo meelaha ay joogaan. Arrimaha dadkaan soo jiito maahan kuwa horumarka ee sida tartartiibta ah u dhaco ee waxay arkaan kaliya xawaadista kadiska ku dhacdo. Tusaale, haddii la ballaarinayo iskool sii jiray ma jiro qof ku mashquulayo dhismaha meesha ka socdo, wuxuuna dhammaan isagoon cidna ku baraarugin.
Dhinaca kale, haddii qof la dilo ama duqayn, qarax ama musiibo kale dhacdo waxaa loo kala hormari tabainta dhacdadaas. Mareegaha wararkuna waa la mid. Iyagu waxayba sii dheer yihiin inay si ku talagal ah u raadiyaan wararka xasaradda abuurayo si ay u helaan akhristayaal badan.
Soo gudbinta wararka xun waxay keentay inuu gobalku noqdo meel laga cabsado. Dadku waxay aamineen in Gedo tahay gole laga guuray, maalgashi uusan ka jirin, adeeg iyo waxyaabaha nolosha aasaasiga ah loogu baahanyahay aan laga heli karin. Cabsidaan waxay niyad jabisay dad badan oo maalgashi ku samayn lahaa gobalka ama booqan lahaa ama kuba noolaan lahaa.
Si aan wax ooga badalno muuqaalkaas, aana u helno xog dhab ah oo dheeli tiran oo ku saabsan gobalka, waxaan i joogta usoo gudbin doonnaa haduu Eebe idmo mashaariicda horumarineed ee gobalka ka dhaco sanad walba. Halkaan waxaan kusoo gudbin doonaa mashaariicdi ugu muhimsanaa ee ka hirgalay gobalka guga 2017-ka. Waxaan waqti galiyay inaan helo xog buuxdo oo gobalka oo dhan ah laakiin kuma wada guulaysan.
Waxaan isku dayi doonaa inaan labo qormo ka dhigo si ayan noogu dheeraan waxaana soo gudbin xogta oo kooban oo aan wax faahfaahin la socon. Waxaa baraarujinayaa in aanan tagin magaalo walba mashruuc walbana aanan ka war helin sidaa darteed waxaan ka tago ku talagal maahan ee waxaan ka hadlay intaan ogahay. Qofkii helo xog kale ama haddaba hayo ha ila soo xariiro si aan ooga daba geeyo.
Dagmada Baardheere waa dagmadii ugu danbaysay ee laga saaro Shabaabka. Muddo badan ayaa waxaan laga fulin mashaariic horumarineed. Sanadkaan waxay heshay mashaariicdi ugu badnayd ee ay bixiyaan hayadaha caalamiga ah. Mashaaruiicda ugu badan ee ka fulay waa kuwa ay fuliso hayada IOM maalna galiso USAID. Mashaariicdaan ayaa waxaa laga fuliyaa meelaha laga qabsaday xarakada Shabaab, waxaana loogu magac bixiyay mashaariicda xasalinta waqtiga kala guurka.
mashaariicdaan ayaa u badnaa dayac tir iyo dhismayaan yaryar waxaana ka mid ahaa:
1: Dayactir lagu sameeyay xafiiska dagmada. 2: Dayactir iyo hagaajin lagu sameeyay gagida diyaaradaha. 3: Dhismo cusub oo qaybo dhowr ah ka kooban oo loo dhisay ururada rayidka iyo arrimaha bulshada. 4: Dayactir iyo qurxin lagu sameeyay garoonka kubbada kacta. 5: Biyo xireen aan weynayn oo lagu sameeyay farraq dhib weyn ku hayay isu gudbidda dadka. 6: layrarka soolarka ku shaqeeyo oo lagu xiray waddooyinka ugu muhiimsan magaalada.
Waxaa sidoo kale dayactir iyo dib u habayn lagu sameeyay isbitaalki dagmada oo aan muddo ku dhow 20 sano aan shaqayn. Isbitaalka soo noolayntiisa ayaa ah mid ahmiyad weyn u leh dagmada waxayna qayb weyn ka qaadan doontaa sixada dadka iyo horumarka guud ee gobalka.
Dhinaca waxbarashada, iskoollo hoose oo loogu talagalay dadka barakacayaasha ah ayaa laga furay dagmada kuwaas la filayo inay daboolaan baahida caruurta dhulkoodi kasoo qaxday ee ku dhibaataysan bannaanka dagmada. Mashruuca iskoollada waxaa fulisay hayada HIRDA.
Dagmada Garbahaareey ayaa waxaa muddo dheer saarnaa go'doomin ay ku samaysay xarakada shabaab. Go'doomintaas ayaa adkaysay mashaariic badan oo dagmada ka hirgali lahaa. Laakiin waxaa laga dhaxlay faaiido mustaqbalka u fiican taasoo ah in dadku isu tashaday. Garbahaareey masharricda ka hirgasho inteeda badan waxaa hormuud ka ah dadka deegaanka.
Sanadkaan kaliya waxaa dhisay labo buundo oo yaryar kuwaas oo la saaray farraqyo maritaankoodu dhib weyn ahaa. Inkastoo qarashki ka go'ay oo wali qaybyo jirto hadana waxay ahayd tallaabo muhiim ah oo ay qaadeen dadka deegaanku.
Shirakadda gaarka loo leeyhay ee Raasumaal ayaa iyana ka hirgalisay dagmada mashruuc biyo galin ahaa kaas oo ay ku baxday lacag ku dhow nus malyuun doolar. Mashrrucaan ayaa noqday kii ugu faaiidad badnaa ee abid soo mara dagmada waxaa marki ugu horraysay dagmada laga cabbay biyo macaan. Biyaha macaan ee nadiifka ah waxay kaalin muhiim ah ka cayaarayaan sixada iyo yaraynta xanuunnada ka dhasho biyaha wasaqaysan sida shuban biyoodka oo deegaan dhib weyn ku hayay.
Tuulada Maykaareebay, oo hoos timaaddo Garbahaareey, ayaa iyana waxaa laga qoday ceel riig ah oo qarash badan lagu bixiyay. Tuuladaan oo ceelki hore aasmay biyaheeduna qaraar ahaayeen ayaa lagu le'an jiray waqtiyada jiilaalka. Hayadda Al-Raxma oo ah mid dadka deegaanku leeyihiin ayaa ceelkaas suura galisay waxaana 200 mitir ka dib loo tagay biyo xareed ah.
Xagga waxbarashada, waxaa la dhisay dhisme cusub oo uu yeeshay dugsiga sare ee An-Anwar. Dismahaan oo ka kooban afar qol, labo musqulood, xafiis iyo hool ayaa waxaa fulisay hayadda IOM. Hayaddaan ayaa sidoo kale dhistay suuqa caanaha oo ay aad ugu dhib qabeen haweenka miyiga caanaha ka keeno oo qorrxada la fahiisan jiray caanaha ay iibinayaan. Dhismaha suuqa iyo kan iskooka waxaa ku baxay adduun gaarayo $120,0000.
HIRDA ayaa iyana ka hirgalisay sadex iskool oo hoose ku waasoo loo dhisay dadka barakacayaasha ah. Iskoolaadaan ayaa kiiba waxaa uu ka koobanyahay labo fasal iyo labo musqulood, waxaana dhigayo kiiba afar macalin iyo maamule. Sadex goobood oo ay dadka barakacayaasha ah Dagan yihiin ayaa laga dhisay iskoolladdaan.
waxaa baraarujin mudan waxa loola jeedo barakacayaal. Dadka kasoo barakacay dhulkoodi waa labo. Kuwa waa dad ka yimid meelo ka baxsan gobalka Gedo sida Bakool iyo Bay iyo meelo ka fog. Kuwa labaad waa dadki dagganaa hareeraha magaalada oo inta abaaruhu xoolihii ka dhammeeyeen ka dibna iyagoo gacmo maran baladka soo gaaray. Labada qayboodba isku si ayaa loola dhaqmaa kala sooc la'aan ayaana wixii loo karo la taraa.
Waxaa mugdi ku jiro inta ay sii socon doonaan iskooladaan maadaama ay HIRDA sheegtay inay gacanta ku haynayso lix bilood kaliya. Hasayeeshee marba haddii la dhisay waxaa la filayaa inay dadka loo dhisay si buuxdo ula wareegi doonaan maamulkiisa.
Guud ahaan, sanadkaan wuxuu ahaa sanad u wacnaa magaalooyinka aan kor kusoo xusay, inkastoo jireen dhacdooyin dhowr ah oo dhibkeeda lahaa.
lasoco qaybta xigto Eebe idankii
Toban Sano oo Xasillooni Nololeed ah: Toban Guuradii Guurkayga
By ibrahim Aden shire February 22, 2018
Maanta oo kale Toban sano ka hor (23/02/2008) ayuu Sheekh Xasan Axmed Nuur qabbiltu yiri Laylo Aadan Maxamed isagoo aniga iga wakiil ah. Guntinta xirantay maalinkaas, waxay ahayd natiijo ka dhalatay sideed sano oo shukaansi iyo haasaawe jeceyl ah. Lix sano oo ka mid ah siddeeddaas sano, waxaan ku kala noolayn dhul aad u kala durugsan,farriimaha jeceylkana haadka samada duuliyo haatufkaa siday.
Maalintaas waxaa furmay bog cusub waxaana bilowday geedigii lagu ogaan lahaa dhadhanki mirihii siddeedda sano la kobcinayay. waxaa la guda galay markaan kala ogaan lahayn inaan sun iyo wabaanyo huursanaynay iyo inaan sabuul gallay iyo saan wacan waraabsanaynay.
Sacdiyo Xawaash ayaan ka guntay hadalkaan soo socdo, mar ay ka warraymaysay saygeeda fiicnaantiisa "guurku waa god madow oo aad gacanta u dirto. In abeeso ka qaniintana waa suura gal in dahab kaa soo raacana waa suura gal. anigu dahab ayaa iga soo raacay" ayay tiri.
Sida Sacdiya oo kale, ayaa aniguna godkii aan gacanta u dira…
Qof Wax ma Baddalo ee Qalin iyo Qoraal ayaa wax Baddalo
By ibrahim Aden shire May 24, 2018
Aadanuhu waa is baddal u joog. Wuxuu tartan kula jiraa isbadalka Rabbaniga ah ee ku dhacayo bii’ada uu ku noolyahay. Qowmiyaddi la socon waydo xawaaraha isbaddalku ku socdo waxaa ku dhaco dib u dhac ka reebo dunida kale.
Guud ahaan caalamka islaamka waxaa ku yimid dib u dhac xagga horumarka iyo hoggaanka dunida ah. Dalalka saboolka ah ee dalkeennu ka mid yahay ayaa ugu sii daran. Waxay u ilmaynayaa isbaddal siyaasadeed, mid bulsho, mid dhaqaale, mid aqooneed iyo mid hoggaan. Qof walba oo aad waydiiso waxa naga dhimman wuxuu si fudud kuu dhihi isbaddal ayaa loo baahan yahay.
Hasa ahaatee wax mushkilad noqotay in la fahmo cidda laga sugayo inay isbaddalka keenaan. Dadka intiisa badan waxay eegayaan madaxda iyo siyaasiyiinta oo ay ka sugayaan isbaddal dhinac walba ah. Laakiin qof wax ma baddali karaa iyada oo aysan bulshadu is baddalin? Bulshaduse yaa baddali karo yaase saamayn wax baddali karto yeelan karo?
Dabcan duunyo iyo dugaag isbaddal horumarineed laga sugi mahayo ee dad iyo sha…
Kumuu ahaa Ibnu Dhufayl?
By ibrahim Aden shire June 05, 2018
Sanadki hore dhammaadkkisi ayaa qormo lagu daabacay bolooggaan waxaa lagu magac-dhabay Ibnu Dhufayl. Ma uusan ahayn ruux aan horay u maqlay. Waxaan jeclaystay inaan wax badan ka ogaado. Akhris badan ka dib waxaan ogaaday inuu ahaa sheekh meelo badan in looga daydo mudan, gaar ahaan jeceylka uu aqoonta u qabay iyo dadaalki uu galiyay raadinteeda. Sidaa darteed waxaan jeclaystay inaan la wadaago dhalinta Soomaaliyeed ee marki ay hal maaddo bartaan isu maleeyo inay waxba u harin si ay u ballaariyeen raadinta cilmiga siduu uu Ibnu Dhufayl-ba u kulmiyay culuum badan oo kala duwan.
Ibnu Dhufeyl waa Faylasuuf saynis yahan iyo dhaqtar muslim Carab ah. Waa mid kamid ah maanshiilayaasha Carbeed Ee magacoodu uu sida aadka ah u baahay. Wuxuu dhaxal ahaan u reebey buugaag badan oo uu ka qoray falsafada, suugaanta Carbeed, xisaabta, meeryaasha iyo caafimaadka. Magaciisu Waa Abuu Bakar, aabihii waxaa la oran jiray Cabdi Malik Maxamad. Qabiil ahaan wuxuu kasoo Jeedaa qabiilka carbeed Ee Qeys Bin Cayla…
Ibrahim Aden Shire Page
Maxaa ka suura gal ah in dadka Bariga Afrika uu Yeesha isu-socod furan (Free Movement of peoples)?
By ibrahim Aden shire February 14, 2018
Isniinti ina dhaaftay waxaa Xamar lagu qabtay shir wadatashi oo ku saabsanaa sida lagu suuragalin karo helidda isu-socod furan oo ay helaan dadka dagan Bariga Afrika. Shirkaan ayaa wuxuu ku koobnaa kaliya waddamada IGAD ku midaysan oo ay Soomaaliya ku jirto.
Inta badan dadka soomaaliyeed iyo idaacadahaba sawir madow ayay ka bixiyeen qorshaha la wado. Waxaa aad looga dhawaajiyay in la midaynayo baasaborrada soomaaliya iyo Itoobiya. Taasoo ah cabsi na haysay tobanki sano ee lasoo dhaafay. Haddaba maxaa ka suura gal ah in la helo waddamada Bariga Afrika oo xuduudaha isu furo? Haddiise ay dhacdo yay dan ugu jirtaa?
Sodanki sano ee lasoo dhaafay waxaa si xowli ah ku socday dhisamaha xulufo goboleed. Qaarad walba waxaa laga dhisay urur ay waddamo koox ah ku middaysan yihiin. Afrika waxaa ka jiro IGAD, SADC, ECOWAS iyo kuwa kale. Aasiya waxaa ka jiro kuwa badan sida AFTA, Yurub iyo Amerikana waa la mid.
Dhammaan ururadaan waxaa loo sameeyay dano siyaasadeed iyo kuwo dhaqaale, waxaana ugu badan…
Hadalka cadowga ha u qaban madaxdaada iyo dadkaada
By ibrahim Aden shire June 25, 2018
Lagdanka iyo isu-xoog-sheegashada u dhaxeeyo aadanaha waa mid waliggiis jiray. Had iyo jeer damac qolo ka galo xaq dad kale leeyahay ayaa keeno xurguf mararka qaar ku dhammaado dhimasho. Ilma aadan oo dhowr ah hal abbo iyo hal hooyo kaliya leh adduunka intaan la ekna kaligood ku nool ayuu damacu bilowday.
Waxaa la sheegaa in markii u Qabiil Habaail ku dilay xaq uusan lahayn ay dunida ku noolaayeen lix qof kaliya oo labo ahaayeen kuwa is dilay. Damaca iyo Hunguri wayninka ku dhisan waxaad haysato kuma deeqaan ama kan kale wuxuu haysto ayaa kaada ka wanaagsan waa mid maalintaas bilowday ilaa qiyaamahana jiri doono.
Waxaa kala duwan farsamada iyo habka loo maro hadba waqtiga la joogo iyo dadka nool. Sidoo kale ilbaxnimada dadka lagu socdo ayaa go'aamiso luuqada la isticmaalayo iyo wajiga la tusayo dunida kale. Laakiin guumayste waqti walba oo uu joogo farsamadiisu saddex shay kama baxaan. Mid ku saabsan dhulka la rabo in la qabsado, mid ku saabsan dadka loo socdo in la qabsado iyo m…
Dhaawaca ugu weyn ee saboolnimadu ay gaysato waa dareemidda saboolnimada
By ibrahim Aden shire March 01, 2018
Saboolnimadu waa mid dhib badan waxayna geysataa dhaawacyo kala duwan. Waxay bahdishaa qofkeeda. Waxay baabi'isaa karaamada shaqsiga waxayna dadka ku jarribtaa wax uusan doorteen. Sayid Cali Allaha ka raali nodee ayaa la sheegay inuu yiri "Faqrigu haddii uu qof ahaan lahaa, madaxa ayaan seef ooga goyn lahaa".
Hasa ahaatee, dhaawacyada uu gaysto faqrigu waa kala dhib iyo dhibaato badan yihiin. Midka ugu dhibka badan maahan mid muuqdo ama fool ku yaal ee midka qarsoon oo qofka laabtiisa ku baaqi ah. Ma jiro dhaawac ka weyn in qofku dareemo inuu faqiir yahay. Haddii uu sabool yahay balse uusan dareensayn inuu faqiir yahay wuu caymo qabaa, noloshiisana horumar ayay yeelan.
Keith Payne waa borofeesar ku taqasusay kasmo-nafeedda. Wuxuu macalin yahay jamaacadda North Carolina. Keith waxaa uu xasuustaa is badalki ku dhacay maalintuu saboolnimada dareemay. Waxaa uu yiri isagoo ka warramayo arrintaas:
Waxaan kasoo jeeday qoys dan yar ah sidaa darteed waxaan xaq u lahaa cunti bilaa…
Erayadii Hurdada ii diiday
By ibrahim Aden shire May 17, 2018
Waa xagaagi 2003di. Waddanka waxaan joogaa dhowr bilood kaliya. Waxaan aadaa meel lagu maaweeliyo dhalinta ka saaqidday iskoollada shaqana aan doonan. Dadka dhigo iyo kuwa maalgaliyo barnaamijka waxay ku andacoodaan in dhalintaan maankooda iyo muraalkooda la dhisayo si ay shaqo u raadsadaan dadkana ula mid noqdaa. Laakiin aniga iyo inta ila mid ah waxaan u tagnaa lacag yar oo soddon gini ah taasoo asbuuci la isa siiyo iyo kaar baska lagu raaco oo isna asbuucle ah.
Dhammaan dhalinta aan meesha ku bartay oo midkoodna uusan labaantanki gaarin waa wada muslimiin Soomaali badanna ku jirto. Waxaa ka mid ah wiil asal ahaan Pakistaan kasoo jeeda laakiin ku dhashay Ingriiska. Wuxuu jiraa 17 sano oo kaliya. Ma tukado wax astaan diimeed ahna kama muuqato. Runti da’da uu jiro ayaaba ah tii dhalintu diinta ku dhaqankeeda ka weecan jireen. Laakiin isaga waxaa usii dheer howlo kale.
Mar walba waxaa dhagaha ugu jiro sameecado uu muusitigo ka dhagaysto kuna jaaso. Waqtiga biririfta, isaga gooni ayuu…
Maxaa laga filan karaa Imaaraatka, ka dib xariirka xumaaday ee Soomaaliya
By ibrahim Aden shire April 14, 2018
Dalka Imaaraadka Carabtu waa dal bad ahaan aad u yar, dadkiisu dhowr milyan uusan dhaafsiisnayn, xadaarad hooseeye ilbaxnimadiisuna boqol sano aysan ka shishayn. Saas oo ay tahay sanadahaan danbe awoodiisa aad ayay usoo shaac baxay. Isaga iyo dalalka kale ee Khaliijkuba waxay ku amar taagleeyaan dowlado waaweyn, una yeeriyaan waxa ay doonaan.
Dhawaan ayay ahayd marki ay soo baxday in Imaaraatku codsaday in la baddalo wasiirka arrimaha dibada ee Maraykanka, codsigoodina dagdag ayaa loo ajiibay. Kaligood maahaan. Sacuudiga ayaa dalbaday in wasiirka arrimaha dibada loo magacaabo kolin Bowel waqtiguu Buushki yaraa waana laga yeelay si qasab ah.
Sidoo kale, waxay dowladaha waaweyn ee reer Galbeedka ku qasbaan inay u hadlaan sida ay iyagu rabaan. Sanadki hore Taraam oo ku hadlayo afka waddamada Khaliijka ayaa sheegay inuu jabin doono heshiishki Nukliyeerka ee Iiraan kala dhaxeeyay.
dowlado dhowr ah oo arkayay sida masuuliyad darrada ah ee ay wax u socdaan Faransiiskuna ka mid yahay ayaa a…
Isu Ekaa Raggii Imaaraat Aaday iyo Wang Jingwei
By ibrahim Aden shire April 29, 2018
Khamiisti (26/04/2018) waxaa magaalada Dubaay ee Imaaraatka shir ku qabtay Cabdi Cali Gaas hoggaamiyaha maamulka Puntland. Waqtiga ay ku beegnayd, ujeedka laga lahaa iyo sida loo dhigay intaba waxay dhabar jab ku ahayd dowladda Soomaaliya oo go'aan adag balse loo baahnaa ka qaadatay Imaaraatka. Balse mudane Gaas iyo kuwo la mid ah uma horayn hogaamiye dhabar jabiyo dalkooda waqti xaalad adag lagu jiro. Tusaalaha ugu fiican waa Wang Jingwei oo ahaa Shiinays.
Wang wuxuu ku dhashay koofurta Shiinaha 1883di. 1903di waxaa waxbarasho dibadda ah loogu diray dalka Jabaan. Waxbarashada waxaa u diray dowladdi markaas jirtay ee ay hoggaaminayeen firkii boqortooyadi Qing oo ahayd boqortooyo taag daran markaas maqaar saar ree Galbeed hoos joogto ahayd. Waqtiga Wang uu korayay waa xilligii ree Galbeedku xoogoodo faayay inta badan Shiinahana iyagaa haystay.
Intii uu Jabbaan joogay Wang wuxuu xariir la yeeshay Sun Yat-sen oo ahaa ninki hoggaaminayay kacdoonkii looga soo horjeeday boqortooyada.…
Anigu sidiibaan ahaye adinkaa isoo gaaray: Maxaan ka baran karnaa doodda Sheekh Bashiir Shiil iyo Cabdirisaaq Xirsi
By ibrahim Aden shire June 16, 2018
Waxaa ayaantaan socotay dood u dhaxaysay labo wadaad oo Kanada ku wada nool. Labadan sheekh fool ka fool uma aysan wada hadal balse waxay isugu jawaabayeen muuqaallo duuban. Doodda u dhaxayso labada sheekh waxay ku saabsantahay in muslimiinta ku nool waddamada Galbeedku ay guryo ku qaadan karaan nidaamka dulsaarka (ribada) ee wax lagu kala iibsado marki la joogo waddamadaas.
Sheekh Cabdirisaaq ayaa qabo inay dadkaasi u bannaantahay in guryaha lacag ay ku gataan ay ka daynsadaan bankiyada dulsaarka qaato. Sheekh Bashiir wuxuu leeyahay sinnaba uma bannaana in qof muslim ah uu ribo qaato ama bixiyo.
Mas'alada waxay tahay, kan ku saxan iyo iyo kan khaldan midna anigu xaq uma lihi inaan ka hadlo waayo aqoonteed ma lihi. Hasa ahaatee waxaa ii muuqatay inay jiraan casharro muhiim ah oo ka baxsan mas'alada taaso ka muuqato qaabka wax u socdaan. Labo arrimood ayaan hoos kusoo qaadi.
Isbaddalka ku dhacayo bulshada Soomaaliyeed ee qurbaha timid
Soomalidu xooggeedu wuxuu qurbaha yimid wi…
Ibrahim blog 2017